Real Madrid oo suuqa kala iibsiga cayartooyda go’an ka gaartay. – iftiin fm
Real Madrid oo suuqa kala iibsiga cayartooyda go’an ka gaartay.
June 1, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Kooxda Real Madrid ayaa Laga yaabaa in ay Bilaa saxiix noqoto suuqa kala iibsiga soo socda sabab la xidhiidha in ay kooxda reer Spain ay wajaheyso caqabado dhanka dhaqaalaha ah oo ka dhashay dhibaatada Xanuunka Korona.
Kooxda Real Madrid ayaa caadi ahaan samaysa saxiixyo waaweyn suuqyada laakiin wargayska MARCA ayaa sheegaya in ayna Real Madrid u badnayn in ay samayso wax saxiixyo ah sabab la xidhiidha khasaaraha ka dhashay xanuunka Korona kadib markii la joojiyay kubada cagta.
Wararka ayaa sheegaya in ay Real Madrid la kulantay khasaare dhanka garoonka ah iyo waliba iibintii Tigidhada garoonka iyo lacagtii ka soo galaysay baahinta kulamada taas oo ku keentay khasaare aad weyn halka ay filayaan in ay lumiyaan lacag ka badan 150 milyan oo euro xilli ciyaareedka dambe hadii kulamada lagu ciyaaro garoomo bilaa taageerayaal ah.
Isla wargayska MARCA ayaa sheegaya in ay Real Madrid xiddigaha ay doonayso u sheegtay in ay iska diidaan kooxaha kale waliba ay sugaan hal sano oo kale si ay ugu soo biiraan Santiago Bernabue.
Labada xiddig ee sida weyn loola xidhiidhinayo Real Madrid xagaaga ayaa ah xiddiga Kooxda Borussia Dortmun ee Erling Haaland & Xiddiga khadka dhexe ee Rennes Eduardo Camavinga.
Sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa lala xidhiidhinayaa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United ee Paul Pogba laakiin Heshiiskaas ayay u badantahay in uuna dhici doonin.
← Qaar ka mid ah Qaandaraasleyda Garissa oo baaq uu direen Senetar Yusuf Hajji
Madaxweyne Uhuru kenyatta oo ka hadlay waxbarashada Dalka →